Ngaba ufuna igqwetha losapho eliza kukunceda?
Ngamanye amaxesha kuya kufuneka ujongane nomcimbi osemthethweni kwicandelo lomthetho wosapho. Owona mthetho uqhelekileyo kwezomthetho wosapho kukuqhawula umtshato. Ulwazi oluthe kratya malunga neenkqubo zoqhawulo mtshato kunye nabameli bethu boqhawulo mtshato banokufumaneka kwiphepha lethu loqhawulo mtshato. Ukongeza kuqhawulo-mtshato, unokucinga kwakhona, umzekelo, ukwamkelwa komntwana wakho, ukwala ukuba ngumzali, ukufumana ilungelo lokugcina abantwana okanye inkqubo yokuthatha umntwana ongamzalanga abe ngowakho…
AMALUNGU ENTSAPHO AT LAW & MORE
NGABA UNGUFUNA UKUXELWA NGENKXASO? UKUQHAGAMSHELANA nathi
Ngamanye amaxesha kuya kufuneka ujongane nomcimbi osemthethweni kwicandelo lomthetho wosapho. Owona mthetho uqhelekileyo kwezomthetho wosapho kukuqhawula umtshato.
> Ukuchaswa komzali
> Ukubekwa ngaphandle
Ulwazi oluthe kratya malunga neenkqubo zoqhawulo mtshato kunye nabameli bethu boqhawulo mtshato banokufumaneka kwiphepha lethu loqhawulo mtshato. Ukongeza kuqhawulo mtshato, unokucinga kwakhona, umzekelo, ukwamkelwa komntwana wakho, ukwala ukuba ngumzali, ukufumana ilungelo lokugcina abantwana okanye inkqubo yokuthatha umntwana ongamzalanga abe ngowakho. Le yimicimbi efuna ukulawulwa ngokukuko ukuze uthintele ukujongana neengxaki kamva. Ngaba ujonge kwifemu yomthetho ekhethekileyo kumthetho wosapho? Emva koko uyifumene indawo efanelekileyo. Law & More ikunika uncedo ngokwasemthethweni kwicandelo lomthetho wosapho. Abameli bethu bomthetho wosapho bakwinkonzo yakho neengcebiso zobuqu.
Ukongeza kwimicimbi emalunga nokwamkelwa, ukugcinwa, ukwaliwa ukuba ngumzali kunye nokwamkelwa komntwana abengowomnye umntu okanye abantu ngokusemthethweni, ukukwenza oko, abameli bethu bomthetho wosapho banokukunceda kwiinkqubo ezinxulumene nokubekwa esweni nokubekwa esweni kwabantwana bakho. Ukuba ujongene nenye okanye ngaphezulu yale micimbi, kububulumko ukuba unoncedo lwegqwetha lomthetho wosapho eliza kukunceda ekuhlawuleni ngokusemthethweni.
Ukwamkelwa kudala ubudlelwane bomthetho wosapho phakathi komntu ovuma umntwana kunye nomntwana. Indoda ke emva koko ingabizwa ngokuba ngutata, umfazi ngumama. Umntu owamkela umntwana akafanelanga ukuba ngutata womntwana okanye umama womntwana. Unokumvuma umntwana wakho ngaphambi kokuba azalwe, ngexesha lokumenyezelwa kokuzalwa okanye kamva.
Ngaba ufuna igqwetha losapho?
Iimeko zokuvuma umntwana
Ukuba ufuna ukwamkela umntwana, kuya kufuneka uzalisekise iimeko ezimbalwa. Umzekelo, kufuneka ube uneminyaka eli-16 okanye ngaphezulu ukuba wamkele umntwana. Kodwa kukho iimeko ezingakumbi. Udinga imvume kumama. Ngaphandle kokuba umntwana mdala kuneminyaka eyi-16. Xa umntwana eneminyaka eli-12 okanye ngaphezulu, udinga imvume ebhaliweyo evela kumntwana. Ukongeza, awunokumvuma umntwana ukuba akuvumelekile ukuba utshatele umama. Umzekelo, kuba usisalamane segazi sikanina. Ngapha koko, umntwana onqwenela ukumamkela usenokungabi nabazali bobabini abazali. Ngaba ubekwe phantsi kwelungelo lokugada? Kwimeko enjalo, uya kudinga imvume kuqala kwinkundla yesithili.
Ukwamkela umntwana ngexesha lokukhulelwa
Oku kubhekisa ekuvumeni umntwana ongekazalwa. Ungamamkela umntwana wakhe nawuphi na umasipala wase-Netherlands. Ukuba umama (olindelekileyo) akafiki nawe, kufuneka anike imvume ebhaliweyo yokwamkelwa. Ngaba iqabane lakho likhulelwe amawele? Emva koko ukwamkelwa kusebenza kubantwana bobabini iqabane lakho elikhulelwe ngelo xesha.
Ukwamkela umntwana ngexesha lokumangala
Unokumamkela umntwana wakho ukuba uxela ukuzalwa kwakhe. Kufuneka uxele ukuzalwa kumasipala apho umntwana wazalwa khona. Ukuba umama akaze eze nawe, kufuneka anike imvume ebhaliweyo yokwamkelwa.
Ukwamkelwa komntwana kumhla olandelayo
Kuyenzeka ngamanye amaxesha ukuba abantwana bangavunywa de babe badala okanye babe badala kakhulu. Ulwamkelo ke lunokwenzeka kuwo wonke umasipala wase-Netherlands. Ukusukela kwiminyaka eli-12 ubudala uya kufuna imvume ebhaliweyo evela kumntwana nakunina. Ukuba umntwana sele eneminyaka eli-16 ubudala udinga imvume evela kumntwana kuphela.
Ukukhetha igama xa wamkela umntwana
Into ebalulekileyo yokwamkelwa komntwana wakho, kukukhetha igama. Ukuba ufuna ukukhetha ifani yomntwana wakho ngexesha lokwamkelwa, wena neqabane lakho nifanele niye kumasipala kunye. Ukuba umntwana ungaphezulu kweminyaka eli-16 ubudala ngexesha lokuvunywa, umntwana uya kukhetha eyiphi ifani afuna ukuba nayo.
Ukuba uyamvuma umntwana, uba ngumzali osemthethweni womntwana. Uya kuthi emva koko ube namalungelo noxanduva ezimbalwa. Ukuze ube ngummeli womntwana ngokusemthethweni, kufuneka ufake isicelo segunya lobuzali. Ukwamkelwa komntwana kuthetha oku kulandelayo:
Iqhina elisemthethweni lenziwa phakathi komntu owamkela umntwana kunye nomntwana.
• Uneembophelelo zesondlo emntwaneni ade afike kubudala beminyaka engama-21.
• Wena nomntwana niba ziindlalifa zomthetho zomtshato ngamnye.
• Ukukhetha iifani zomntwana kunye nonina ngexesha lokuvunywa.
Umntwana angafumana ubuzwe bakho. Oku kuxhomekeke kumthetho welizwe onobuzwe ngalo.
Ngaba ungathanda ukumamkela umntwana wakho kwaye usenemibuzo ngenkqubo yokwamkelwa? Zive ukhululekile ukunxibelelana namagqwetha ezomthetho osapho onamava.
Xa umama womntwana etshatile, umyeni wakhe nguyise womntwana. Oku kukwasebenza kubambiswano olubhalisiweyo. Kunokwenzeka ukukhanyela ukuba ngumzali. Umzekelo, kuba iqabane alingotata wemvelo womntwana. Ukukhanyela ukuba ngumzali kunokucelwa nguyise, umama okanye umntwana ngokwakhe. Ukuphika kunesiphumo sokuba umthetho ungamthathi njengobawo utata osemthethweni. Oku kusebenza rhoqo. Umthetho wenza ngathi ubawo katata osemthethweni awuzange ubekhona. Oku kunemizekelo kwiziphumo zokuba ngubani yindlalifa yabo.
Nangona kunjalo, kukho iimeko ezintathu apho ukwala ukuba ngumzali akunakwenzeka (okanye akusekho) kunokwenzeka:
Ukuba utata osemthethweni ukwanguyise womntwana ngokwendalo;
Ukubangaba utata osemthethweni uvumile kwisenzo sokuba inkosikazi yakhe ikhulelwe;
• Ukuba utata osemthethweni wayesazi ngaphambi komtshato ukuba inkosikazi yakhe ezayo yayikhulelwe.
• Ukhetho lwenziwe kumatyala amabini okugqibela xa umama enganyanisekanga ngotata womntwana ozelwe.
Ukuphikiswa kobuzali kuhlala sisigqibo esibalulekileyo. Abameli bosapho Law & More bakulungele ukukucebisa ngeyona ndlela inokwenzeka ngaphambi kokuba uthathe isigqibo esibalulekileyo.
Umntwana ongafakwanga mntwana akavumelekanga ukuba enze izigqibo yedwa. Kungenxa yoko le nto umntwana ephantsi kwegunya lomzali omnye okanye bobabini. Rhoqo, abazali bafumana ngokuzenzekelayo ukugcinwa kwabantwana babo, kodwa ngamanye amaxesha kuya kufuneka ufake isicelo sogcino ngenkqubo yenkundla okanye ngefomu yesicelo.
Ukuba unelungelo lokugcina umntwana:
Unoxanduva lokukhathalela nokukhulisa umntwana.
Almost Uhlala unesibophelelo solondolozo, okuthetha ukuba kuya kufuneka uhlawule iindleko zenkathalo kunye nemfundo (ukuya kuthi ga kwi-18 yobudala) neendleko zokuphila nokufunda (ukusuka kwiminyaka eli-18 kuye kweli-21).
• Ulawula imali yomntwana kunye nezinto;
Ungummeli wakhe osemthethweni.
Ukugcinwa komntwana kunokucwangciswa ngeendlela ezimbini. Xa umntu omnye eselugcinweni, sithetha ngogcino-ntloko-nye, kwaye xa abantu babini benokugcinwa, oko kuchaphazela ukugcinwa ngokubambisana. Ubuninzi babantu ababini banokugcinwa. Ke ngoko, awunakufaka isicelo segunya lobuzali ukuba abantu babini sele benomntwana.
Ufumana nini ukugcinwa komntwana?
Ngaba utshatile okanye unentsebenziswano ebhalisiweyo? Ke bobabini abazali baya kuba nelungelo lokugcina umntwana. Ayibikho njalo, ngumama kuphela oya kunikwa ilungelo lokugcina ngokuzenzekelayo. Ngaba utshata njengabazali emva kokuzalwa komntwana wakho? Okanye ngaba ungenela ubambiswano olubhalisiweyo? Kwimeko enjalo, uya kufumana kwakhona igunya lobuzali ngokuzenzekelayo. Umbandela kukuba umvumile umntwana njengotata. Ukuze ufumane igunya lokuba ngumzali, awunakuba ungaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala, ube phantsi kwelungelo lokugada okanye unesifo sengqondo. Umama ongaphantsi kweminyaka eli-16 okanye eli-17 ubudala unokufaka isicelo enkundleni ukuze avakiselwe ubudala bakhe. Ukuba akukho namnye wabazali ogcinileyo, ijaji yonyula umgadi.
Joyina ukugcinwa kwimeko yokuqhawula umtshato
Isiseko soqhawulo-mtshato kukuba bobabini abazali bagcina ilungelo lokudibana. Ngamanye amaxesha, inkundla inokuphambuka kulo mthetho ukuba ngaba ilungele abantwana.
Ngaba unqwenela ukufumana ilungelo lokugcina umntwana wakho okanye unemibuzo malunga negunya lobuzali? Ke nceda unxibelelane nomnye wegqwetha losapho elinamava. Siyavuya ukucinga kunye nawe kwaye sikuncede ngesicelo segunya labazali!
Nabani na ofuna ukukhulisa umntwana ovela eNetherlands okanye kwilizwe langaphandle kufuneka ahlangabezane neemeko ezithile. Umzekelo, kufuneka ube ungaphezulu kweminyaka eli-18 ubudala kunomntwana onqwenela ukumkhulisa. Iimeko zokuthatha umntwana ongamzalanga abe ngowakho eNetherlands ziyahluka ngokwemibandela yokuthatha umntwana ongamzalanga abe ngowakho phesheya. Umzekelo, ukuthathwa komntwana ngumntu ongamzelanga ibengowakhe eNetherlands kufuna ukuba umntwana abe ngowakho Ukongeza, umntwana kufuneka abe mncinci. Ukuba umntwana unqwenela ukumkhulisa umntwana ongamzalanga abe ngowakho uneminyaka eli-12 ubudala okanye ngaphezulu, imvume yakhe iyafuneka ukuze ayamkelwe. Ukongeza, imeko ebalulekileyo yokwamkelwa komntwana abengowomnye umntu waseNetherlands kukuba uye wamkhathalela umntwana wakhe iminyaka emibini. Umzekelo njengomzali okhulisa umntwana ongengowakho, umnakekeli okanye umzali womtshato wesibini.
Ukwamkelwa komntwana abengowomnye umntu kwilizwe liphela, kubalulekile ukuba ungakafiki kwiminyaka eyi-42. Kwimeko ezizodwa, kungenziwa into ekhethekileyo. Ngapha koko, le miba ilandelayo isebenza kukwamkelwa komntwana ngokusemthethweni
• Wena neqabane lakho kufuneka ninike imvume yokuhlola iNkqubo yeXwebhu lamaJaji (i-JDS).
Umahluko wobudala phakathi komzali owamzeleyo umntwana ukuba akhulise umntwana awunakodlula iminyaka engama-40. Kwimeko yeemeko ezizodwa, ngaphandle kukodwa kunokwenziwa.
Impilo yakho isenokungangabi ngumqobo ekuthatheni i-awuti Kuya kufuneka ukuba uvavanyelwe ngugqirha.
Kuya kufuneka uhlala eNetherlands.
Ukusukela ngexesha lokuhamba komntwana wasekhaya eNetherlands, kunyanzelekile ukuba ubonelele ngeendleko zokukhathalela nokukhulisa umntwana.
Ilizwe apho umntwana avela kulo avela kuye linokubeka nemiqathango yokwamkelwa komntwana abengowomnye umntu okanye abantu ngokusemthethweni. Umzekelo, malunga nempilo yakho, ubudala okanye umvuzo. Ngokuyintloko, indoda nebhinqa banokuthatha kuphela umntwana avela phesheya kunye ukuba batshatile.
Ngaba unqwenela ukwamkela umntwana waseNetherlands okanye kwilizwe langaphandle? Ukuba kunjalo, yiba nolwazi malunga nenkqubo kunye neemeko ezithile ezisebenza kwimeko yakho. Amagqwetha omthetho wosapho Law & More zikulungele ukukucebisa nokukunceda kule nkqubo.
Ukukhutshelwa ngaphandle ngumda kakhulu. Ingasetyenziselwa xa kungcono ukukhusela umntwana wakho ukuba aphile kwenye indawo okwethutyana. Ukukhutshelwa ngaphandle kusoloko kuhamba kunye nokubekwa esweni. Injongo yokufakelwa kwenye indawo kukuqinisekisa ukuba umntwana wakho uhlala ekhaya kwakhona emva kwexesha elithile.
Isicelo sokubeka umntwana wakho ngaphandle kwekhaya sinokungeniswa kuMgwebi waBantwana luKhathalelo loluNtu okanye yiBhodi yokuKhathalela nokuKhuselwa kwaBantwana. Kukho iindlela ezahlukeneyo zokuphuma. Umzekelo, umntwana wakho unokubekwa kusapho olukhulisayo okanye kwikhaya lokugcina abantwana. Kuyenzeka ukuba umntwana wakho abekwe kunye nosapho.
Kwimeko enjalo, kubalulekile ukuba uqeshe igqwetha omthembayo. Ku- Law & More, iimfuno zakho kunye nezo zomntwana wakho zibaluleke kakhulu. Ukuba ufuna uncedo kule nkqubo, umzekelo ukuthintela umntwana wakho angabekwa kude nekhaya, ufike kwindawo efanelekileyo. Amagqwetha ethu anokukunceda kunye nomntwana wakho ukuba isicelo sokufakwa kwelinye ilizwe singenisiwe, okanye singangeniswa, kwiJaji yaBantwana.
Amagqwetha omthetho wosapho Law & More inokukukhokela kwaye ikuncede ucwangcise onke amabakala omthetho wosapho ngendlela efanelekileyo. Amagqwetha ethu anolwazi olukhethekileyo kwicandelo lomthetho wosapho. Ngaba unomdla wokwazi ukuba singakwenzela ntoni? Ke nceda unxibelelane Law & More.